Filtrer les éléments par date : mardi, 28 mai 2019
mardi, 28 mai 2019 21:01
Fikajiana ny isan'ny seza
Raha seza tokana no iadiana, dia izay mahazo vato ambony no tonga dia lany.
Raha seza 2 no iadiana dia:
Calcul proportionnel au plus forte moyenne
Ohatra: Fianarantsoa I
Suffrage exprimé na vato manankery (totalin'ny vato rehetra azon'ny kandida rehetra):15254
mardi, 28 mai 2019 17:01
Maroantsetra: Mampifanolana ny voka-pifidianana
Nisy androany ny andian'olona nidina andalambe sady nilanja sorabaventy naneho tsy fahafaliany manoloana ny hosoka sy fanodinkodinana voka-pifidianana.
mardi, 28 mai 2019 16:17
Beraketa - Maintirano: Tamin’ny 10 ora sy sasany maraina vao nisokatra ny biraom-pifidianana
Nisokatra avokoa ireo birao fandatsaham-bato rehetra miisa 25 388 ny andron’ny fifidianana. Nisy, hoy ny teo anivon’ny CENI, ny fahatarana teo amin’ny fisokafan’ny birao fandatsaham-bato maromaro.
Tao amin’ny Kaominin’i Beraketa, ao amin’ny Distrikan’ny Maintirano, no tara indrindra tamin’izany, satria tamin’ny 10 ora sy sasany maraina vao nisokatra ny biraom-pifidianana. Izany dia noho ny fakana ireo entana nampiasaina nandritra ny latsa-bato.
mardi, 28 mai 2019 16:08
Voka-pifidianana: Hatramin’ny 1 jona no fara-fanaterana eny anivon’ny SRMV
Ny voka-pifidianana solombavambahoaka tao amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa no voaray voalohany teo anivon’ny CENI foibe, nanaraka azy ny tao amin’ny Distrika Antananarivo faha-6, Toliara I, Antananarivo Avaradrano …
Araka ny fanazavan’ny CENI dia hatramin’ny 1 jona 2019 no fara-fanaterana ireo voka-pifidianana rehetra avy amin’ny biraom-pifidianana rehetra eny anivon’ny SRMV eny amin’ny Distrika. Manana hatramin’ny 2 jona kosa ny SRMV handefa ny voka-pifidianana rehetra mankany amin’ny CENI.
Ny 15 jona 2019 no vinavinain’ny CENI hamoahana ny voka-pifidianana feno vonjimaika tamin’iny fifidianana Solombavambahoaka iny.
mardi, 28 mai 2019 15:59
Mpifidy tsy tao amin’ny lisi-pifidianana: Ireo antony telo nambaran’ny CENI
Miaiky ny CENI fa naharay fitarainana maro ny mikasika ireo mpifidy tsy voasoratra tao amin’ny lisi-pifidianana. Antony telo no azo anazavana izany, hoy ny filoha lefitry ny CENI, Rakotonarivo Thierry.
Namafa avy hatrany ireo fisoratana anarana miverimberina ny « opération de dédoublonnage » izay nataon’ny CENI nefa kosa mitazona ny fisoratana anarana any amin’izay adiresy nisoratan’ilay mpifidy farany. Marobe amin’ireo mpifidy, hoy Rakotonarivo Thierry, no misoratra anaty lisi-pifidianana any amin’izay adiresy hafa ankoatra ny fonenany amin’izao fotoana.
mardi, 28 mai 2019 15:57
Fifidianana depiote: 31% ny taham-pahavitrihana ankapobeny vonjimaika
Araka ny antontanisa voarain’ny CENI dia 31% ny taham-pahavitrihana ankapobeny vonjimaika tamin’ny fifidianana solombavambahoaka notanterahina ny alatsinainy 27 mey 2019, nanerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Ny Distrikan’Ankazobe sy Ambovombe no ambany indrindra : 10% raha toa ka ny Distrikan’Ambositra no manana mpifidy nandatsabato be indrindra : 56%.
mardi, 28 mai 2019 15:14
Mahajanga I: Tsy hanaiky voka-pifidianana ny vondron’ireo kandida 13
Nivory ireo kandida depiote miisa 13 eto Mahajanga I androany maraina. Nifanaraka izy ireo taorian’ny fandinihana ny zava-misy fa tsy hanaiky ny voka-pifidianana ka hangataka ny fanafoanana iny fifidianana iny noho ny antony : "hosoka tamin’ny lisi-pifidianana".
Hametraka fitoriana izy ireo rahampitso ary samy hiantso ny mpomba azy avy ireo kandida amin’izany.
mardi, 28 mai 2019 12:30
Seranam-piaramanidina Ivato: Nieren-doza ny fiaramanidin’ny Turkish Airlines
Teo am-piaingàna hihazo an’i Istanbul no nirehitra tampoka ny « réacteur » iray tamin’ilay fiaramanidina mpitondra entana. Efa nisahotaka ny olona teo an-toerana, omaly alahady maraina nahita sy nandre feon-javatra nirefotra.
Tafajanona ara-potoana ilay fiaramanidina ary nieren-doza.
mardi, 28 mai 2019 10:27
Iza no tonga nifidy?
Isan'ny voasoratra: 621
Tonga nifidy: 59
Vato fotsy sy vato maty: 2
Vato manankery: 57
Tahan'ny fandraisana anjara 09.50%
Vato azon'ny kandida A: 28 (28/57x100= 49.12%)
Vato azon'ny kandida B: 13 (22.81%)
Vato azon'ny kandida D: 16 (28.07%)
Lany Solombavam-bahoaka ny kandida A; apoaka champagne.
Rehefa tena atao anefa ny kajy ny fitiavam-bahoaka azy hitondra ny teniny dia
Kandida A: 28/621 x 100 = 4.51% n'ny vahoaka no mankatoa azy.
mardi, 28 mai 2019 10:00
Fifidianana solombavambahoaka: Nandray anjara ireo mpanara-maso iraisam-pirenena
Notontosaina ny alatsinainy 27 mey ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Madagasikara.
Nilamina tamin'ny ankapobeny raha ny fizotran'ny fifidianana, ary dia hita fa ambany dia ambany ny taham-pavitrihina tamin'ity indray mitoraka ity.
Nanao ny fanarahamaso ireo vondrona iraisam-pirenena izay niaraka tamin'ny filohan'ny CENI nitety ireo birao fandatsaham-bato teny Atsimondrano.